Guddoomiyaha Guddiga Dalxiiska Afrika oo u jooga Senegal hawlo muhiim ah
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Guddiga Dalxiiska Afrika » Guddoomiyaha Guddiga Dalxiiska Afrika oo u jooga Senegal hawlo muhiim ah
Guddiga Dalxiiska Afrika • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • Warshadaha Warshadaha • News • Dadka • Wararka Senegal • Dalxiiska • Warka Safarka Safarka • Daalacanayo Hadda
Guddoomiyaha ATB ee Senegal
Cuthbert Ncube, Guddoomiyaha Guddiga Dalxiiska Afrika (ATB), ayaa sii wada hawshiisa ah inuu u safro gees kasta oo dalxiiska Afrika ah si uu isugu keeno qaaradda.
Kulamo laba geesood ah ayaa lala yeeshay kooxda Guddiga Dalxiiska Afrika oo ku saabsan dib-u-qaabaynta Senegal ee raadadka qaaradda.
Ajandaha waxaa ka mid ahaa hindisayaal iskaashi iyo rabitaanka xoojinta xiriirka labada urur si kor loogu qaado dalxiiska.
Kulamadan ayaa waxaa hogaaminayay Safiirka Mudane Deme iyo Gudoomiyaha Fulinta Cuthbert Ncube.
Shalay ayaa ah Guddiga Dalxiiska Afrika Madaxweynaha ayaa la kulmay Madaxweynaha Compact Yaatal, oo ah hay'ad ka wakiil ah daneeyayaasha dalxiiska ee Senegal oo xubin ka ah 934 silsiladaha qiimaha leh ee xafiiskooda ugu sarreeya ee magaalada Soly oo u adeegta sidii xarun dalxiis oo dalka ah.
Guddoomiyaha Ururka Mudane Boly Geuye ayaa kulammo laba geesood ah la qaatay kooxda ATB oo uu hoggaaminayey Safiirka Mudane Deme iyo Guddoomiyaha Fulinta Cuthbert Ncube, iyagoo ka wada hadlay dardar-gelinta iskaashiga iyo xoojinta xiriirka ka dhexeeya labada hay’adood ee ku aaddan horumarinta dalxiiska iyo dalxiiska. dib u qaabaynta Senegal iyada oo ku jirta raadka qaaradda.
Senegal waxay wax badan ka qabatay xakamaynta faafitaanka masiibada iyadoo waddanku gaadhay ku dhawaad ​​​​0% heerka caabuqa kaasoo soo jiitay tiro badan oo dalxiisayaal ah oo inta badan ka yimid Paris, Spain, Germany, UK, iyo qaybo ka mid ah Aasiya. Mr. Boly waxa uu carabka ku adkeeyay baahida loo qabo wada shaqayn dhow oo lala yeesho ATB si loo helo qaab-dhismeedka qaaradaha oo si wanaagsan la isku dubo. Senegal waxay ku taal meel istiraatiiji ah si ay ugu ciyaaraan liiska hore ee fanka, dhaqanka, iyo dalxiiska ciyaaraha in badan oo ka koreeya muuqaalada ku teedsan xeebaha xeebahooda taas oo qofka socotada ah ku reebaysa jacaylka hoygan quruxda badan oo ah goob ay aad u raadiyaan socdaalayaasha caalamiga ah.
Habeen weyn oo dalxiiska ayaa lagu martigelin doonaa qaab shir ah December 10, 2021, kaas oo ay ka soo qayb gali doonaan wasiirada dalxiiska iyo daneeyayaasha ee gobolka Galbeedka Afrika, kaas oo ay soo bandhigi doonaan wasiirada dalxiiska iyo taageerada ATB. Wadashaqeyn ballaaran oo ballaaran oo ka dhexeeya daneeyayaasha dalxiiska ayaa ka dhigi doona Afrika in si wanaagsan loogu ixtiraamo bulshada caalamka dhexdeeda, dalxiiskuna wuxuu horseedi doonaa guusha loo gaaro arrintan.